Published June 16, 2021 at 9:41 AM CDT
Magaalan Sioux City akka ummani nama mana hin qabne kan ala bulan addaa irraa waliigala qarqaaran gaafatani jiran. Magaaalichi har’a wayta maallaqa gargaarsa website dhaan walitti guuran jijjiiramaf akka kennaan gaafatan. Qarqaarsa kennamu akka www.siouxcityassist.org. tti erguu dandeetan himan. Birrin guurame kunis gara mana isaani ykn waan isaan fayyadamanitti kan argamuudha. Ummani qaxxiaan nama kennuu irra website san akka ziyaaran kan gaafatamanii jiru.
Ras Smith itti gaafata Democratic kan yeroo jalqabaaf governor 2022 dorgumuuf ibsee jira.
Smith hoattoota guddisuu fi haala jiruu mijjeessuf akkasumas jiraattota Iowa haala tokkoon fayadduuf envestment biyyati baayisuf akka hojattuu himee jira.
Waterloo dhaa kan dhufe bakka buaa yeroo sadihi har’a caarata har’a ibsee jira. Innii balaa corona virus fideef governor Kim Reynolds akka tae laala.
Democrat’s biraa, state Auditor Rob Sand dabalatee, dorgomiif qophaahu jiran. Smith guyyaa har’aa seati booda haala ifaatin Waterloo keessati duula jalqabe jira.
Board City-County tokko guyyaa kaleessa konsertii gad’aan million $58.4 yaadame ture magaala woodbury County law Enforcement Center akka argatee jiruu himan.
Bakka seera kabachiisanitti hojattooni walgahii godhanitti kaampanichi carataaa Hausmann’s bidd guutumman ibsee jira. Gatiin boordi xiqqaaan jiraatu fi qarqaarsa federela naanicha kan corona virus dhaaf gatii guddaa hin jifachuu wanni inni godhu haala itti fayadaminna hordofuun project kara fulduraati siise jira.
Oromo News: 06/11/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Police Sioux City April 29 Perkins irrati…